Thu, May 28, 2020 at 5:21am
काठमाडौं, फागुन २ । आजको दिन प्रेम जोडिहरुका लागि खास दिन रहेको छ । फेब्रुअरी १४ का दिन प्रेम जोडीहरु एकापसमा उपहार आदान प्रदान गर्दै माया साटासाट गर्ने गर्छन । प्रेममय दिवसका दिन हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका केहि विशेष प्रेम जोडीहरुको बारेमा चर्चा गर्छाै । यी हुन् नेपाली सिने जगतका चर्चित प्रेम जोडीहरु ! नम्रता श्रेष्ठ र दावा स्टेफिन शेर्पा नायिका नम्रता श्रेष्ठ व्यावसायी..
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी ‘प्रिया प्रकाश’ माथि उजुरी दर्ता
काठमाडौं, फागुन २ । केही दिन देखि सामाजिक सञ्जालमा केरलाकी कलाकार प्रिया प्रकाश भाइरल बनिरहेकी छिन् । उनको तस्बिर र भिडियोहरूले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै स्थान पाइरहेका छन् । तर प्रियालाई समस्या थपिएको छ । उनी विरुद्ध हैदराबादमा उजुरी दर्ता भएको छ । मुस्लिमको एक युथ समूहले हैदराबाद पुलिस स्टेसनमा प्रियाको विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको बताइएको छ । मुस्लिम युवाहरूको समूहले भिडियोले मुस्लिमहरूको..
भक्तपुरमा एड्सबारे सचेतना जगाउन एड्रिन प्रधानको म्युजिक कन्सर्ट हुँदै
नगरकोट, २९ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय कण्डम दिवसको अवसर पारेर फागुन १ गते अर्थात् फेब्रुअरी १३ तारिखका दिन विश्वका ४० देशमा म्युजिक कन्सर्ट हुने भएको छ । एड्स हेल्थकेयर फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा विश्वका ४० देशमा एकै दिन हुने म्युजिक कन्सर्टमध्ये नेपालमा ‘सुरुवात’ नामक संस्थाले भक्तपुरमा सो कन्सर्ट गर्न लागेको हो । उक्त कन्सर्ट भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित पद्म माध्यमिकविद्यालय परिसरमा हुने संस्थाले जानकारी दिएको..
काठमाडौँ, २९ माघ । गायिका बबिना किराँतीको आवाजमा ‘माथि माथि हिमाली भेगमा ’ बोलको पुर्वेली गीतको क्यासेट यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । विदेश गएका नेपालीको कथाव्यथालाई समावेश गरिएको सो गीतमा सङ्गीतकार डी आर अतुको शब्द तथा संगीत रहेको छ । माया, प्रेम र परदेशीको कथालाई समावेश गरिएको अत्यन्त फरक धारको गीत भएको कारणले पनि बजार पाउने गायिका किराँतीको भनाइ छ । निर्देशक युवराज वाइवाको..
एजेन्सी, २८ माघ । भारतका कमेडी किङ कपिल शर्मा एक नयाँ कार्यक्रममार्फत् टेलिभिजनमा फर्किंदैछन् । कपिल आफ्नो नयाँ कार्यक्रमका साथ नयाँ सुरुआत गर्न तयार भइसकेको जस्तो देखिन्छन् । मार्चबाट सुरु हुने कार्यक्रमको प्रोमोसमेत तयार भइसकेको छ । प्रोमोमा कपिलले आफू बेरोजगार रहँदाको क्षण देख्न सकिन्छ । उनको घरमा काम गर्ने महिलाले बेरोजगारीलाई संकेत गर्दै कपिललाई लामो बिलको सम्झना गराउँछिन् । ति घरेलु कामदारले..
ह्याक भयो चर्चित गायिका सेलेना गोमेजको इन्सटाग्राम एकाउन्ट
एजेन्सी, २८ माघ । चर्चित गायिका सेलेना गोमेज यति बेला तवानमा छिन् । उनको मङगलबार बिहान इन्सटाग्राम एकाउन्ट ह्याक भएको थियो । झन्डै १२.५ करोड फ्लोअरर्स भएको एकाउन्ट ह्याक भएसँगै पूर्व प्रमी जस्टिन बीबरको नग्न तस्बिर पोस्ट भएको सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । बीबरको उक्त तस्बिर सन् २०१५ मा छुट्टी मनाउँदाको थियो । यस घटनापछि सेलेनाको एकाउन्ट केही बेरको लागि बन्द गरिएको थियो..
१०औँ 'इण्डियन आर्ट फेयर' मा सात नेपाली चित्रकला समावेश हुँदै
काठमाडौँ, २८ माघ । भारतको नयाँदिल्लीमा भइरहेको १०औँ इण्डिया आर्ट फेयरमा नेपालका सात चित्रकलाकारका चित्र समावेश भएको छ । नेपाल कला परिषद्का उपाध्यक्ष सागरशम्शेर राणा र कला निरीक्षक स्वस्ति राजभण्डारीले संयोजन गरेको सो मेलामा नेपालका जीवन राजोपाध्याय, चिराग बाङ्देल, सुजन डङ्गोल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, मेख लिम्बू, सविता डङ्गोल र सुनिता महर्जनका चित्र राखिएका छन् । यही माघ २६ देखि २९ गतेसम्म ओख्ला इण्ड्रष्ट्रियल ग्राउण्ड,..
बाबा रामदेवबारे धारावाहिक टेलिशृंखला बन्दै
नयादिल्ली, माघ २६ । योग गुरु बाबा रामदेवको जीवनीमा आधारित रहेर धारावाहिक टेलिशृंखला बन्ने भएको छ । उनका भक्तहरुलाई उनको जीवनबारे ज्ञान दिने उद्देश्यले यस शृंखला निर्माण गर्न लागिएको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । यो मेगा-सिरिज १२ फेब्रअरीबाट ‘डिस्कवरी जीत’ च्यानलमार्फत प्रशारण हुनेछ । यस सिरिजको नाम ‘स्वामी रामदेव– एक संघर्ष’ राखिएको छ । यस सिरिज झन्डै ८५ एपिशोडको हुनेछ..
बलिउड नायिका प्रियंकाको ’योङ्ग एण्ड फ्रि’ नामक गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
एजेन्सी, माघ २६ । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको अङग्रेजी गीत सार्वजनिक भएको छ । ’योङ्ग एण्ड फ्रि’ नामक गीत हालै युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतको शब्दलाई प्रियंका स्वयम्ले लेखेकी छिन् । हालै उनले दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले यो गीत आफ्नो जीवनको कठिन समयमा लेखेको र गीतमा युवा र स्वतन्त्रतासँगको सम्बन्ध बयान गरेको बताएकी छन् । सो गीतमा प्रियंकाको आवाज लाई..
मलाई अनमोलको स्टारडमले कुनै असर गर्दैन : नवनायिका अदिति बुढाथोकी
काठमाडौं, माघ २५ । यस वर्षको बहुप्रतिक्षीत फिल्म ‘कृ’ भोली शुक्रवारबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउदै छ । युवा स्टार अनमोल केसी यस चलचित्रमा जोडिएका कारण पनि यस चलचत्रिको प्रतिक्षा व्यापक मात्रामा नै रहेको छ । यसै चलचित्रबाट नेपाली सिने जगतमा नव नायिकाका रुपमा अदिति बुढाथोकी पनि प्रवेश गरेकी छिन् । उनले चकलेटी नायक अनमोल केसीसँग स्कृन शेयर गरेकी छिन् । अनमोलले अहिले सम्म..
काठमाडौं, माघ २४ । श्वेता श्री फाउण्डेशनले दरबारमार्ग्स्थित होटल अन्नपूर्णमा मंगलबार कान्छी म्युजिकल नाइट २०१८ सम्पन्न गरेको छ । स्वर्गिय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्मृतिमा स्थापित यस फाउण्डेसनले मंगलबार उक्त कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको हो । संस्थाले श्रेष्ठकै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भ्याडीटोलमा निर्माणाधीन माझी बस्ती निर्माणमा सहयोग जुटाउन सो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई, पुर्व मिस नेपाल सुगरिका केसीले संचालन गरेको..
काठमाडौं, माघ २३ । पछिल्लो समय अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह निकै विवादित तानिएकी छिन् । फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ को सफलता, आर्यनसँग फिल्म ‘कायरा’ गर्न १० लाख पारिश्रमिक गाउँले मन नपर्ने र हालैमात्र बक्षस्थलमा खोपेको टयाटु काण्डले साम्राज्ञी चर्चाको पात्र बनेकी छन् । उनी पछिल्लो समय लगातार केहि न केहि कारण आलोचित भइरहेकी छिन् । युवामाझ छुट्टै क्रेज बनाएकी साम्राज्ञी पहिलो..
भोली दरबारमार्गमा ‘कान्छी म्यूजिकल नाइट २०१८ तथा रेड कार्पेट’ को आयोजना हुँदै
काठमाडौं, माघ २२ । स्वर्गिय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्मृतिमा स्थापित श्वेत श्री फाउण्डेशनले भोली ‘कान्छी म्यूजिकल नाइट २०१८ तथा रेड कार्पेट’को आयोजना गरेको छ । फाउण्डेशनले स्व.अभिनेता श्रेष्ठकै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भ्याडीटोलमा निर्माणाधीन माझी बस्ती निर्माणमा सहयोग जुटाउनका लागि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएको छ । दरबारमार्ग्स्थित होटेल अन्नपूर्णमा आयोजना हुने उक्त साँझमा कान्छी टिम सहित नेपाली फिल्म र साङ्गीतिक क्षेत्रका दर्जनौं व्यक्तिहरूको सहभागिता..
‘पुर्वाञ्चल कलेज प्रिन्सेस र प्रिन्स २०१८’ को लागि आवेदन खुला, फागुनमा अडिसन
काठमाडौं, माघ २१ । ‘पुर्वाञ्चल कलेज प्रिन्सेस र प्रिन्स २०१८’ को लागि आवेदन खुला भएको छ । शुक्रबार घोषणा भएको सौन्दर्य प्रतियोगिताको चौथो संस्करणका लागि आवेदन खुला भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । महिलातर्फको चौथो र पुरुषतर्फको दोस्रो सौन्दर्य प्रतियोगिताको अडिसन फागुन ७ गते सुरु हुनेछ । एड होम एडभरटाइजिङको आयोजना रहने कार्यक्रम बिराटनगरमा हुँदैछ । प्रतियोगितालाई साजिद आलमले कोरियोग्राफ गर्दैछन् । सहभागी..
भक्तपुर, २१ माघ : तीन दशकभन्दा लामो समय कलाकारितामा लाग्नुभएका वरिष्ठ अभिनेता एवं रङ्गकर्मी हरिहर शर्मालाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ । भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित ॐ ज्ञान मन्दिर स्कूलको शनिबार आयोजित २३औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसमा स्कूलका संस्थापक निर्देशक एवं प्रिन्सिपल रामप्रसाद सुवेदीले कलाकार शर्मालाई नगद रु १० हजार एक र सम्मानपत्रसहित ‘ॐ ज्ञान मन्दिर सम्मान, २०७४’ प्रदान गरी सम्मान गरेका हुन् । कार्यक्रममा..
चलचित्रको छायाँकनका लागि दीपिका र इरफान नेपाल आउदै
काठमाडौं, माघ १९ । पछिल्लो समय बलिउड कलाकार नेपालमा आउने क्रम जारी छ । केहि समय अघि मात्र बलिउड अभिनेता सलमान खान, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा लगायतका कलाकार नेपाल आउने विषयले चर्चा पाएको थियो । अहिले भने बलिउडकी चर्चिच अभिनेत्री दिपिका पादुकोण र अभिनेता इरफान खान नेपाल आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । दिपिका र इरफान एक महिनापछि छायाङ्कन हुने चलचित्रको लागि नेपाल आउने..
सम्भावना बोकेकी नायिका दिपिका प्रसाई अहिले गुमनाम
काठमाडौं, माघ १८ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ नयाँ नायक नायिकाको आगमन बढ्दो छ । चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कति पयलाई राम्रो भएको छ भने कतिपयले डेब्यू चलचित्र बाहेक अन्य चलचित्रमा काम पाउन सकेका छैनन् । यसैबीच चलचित्र ‘एश्वर्य’बाट नायिका दीपिका प्रसाईले सिने उद्योगमा डेव्यु गरिन् । चलचित्र रिलिज अगावै यी सुन्दर नायिकाको चर्चा निकै भयो । सिने उद्योगमा सम्भावना बोकेको..
विहे अगावै आमा बन्ने बलिउडका यी चर्चित ४ अभिनेत्री !
एजेन्सी । नेपाली समाजमा विहे अगावै बच्चा जन्माउनुलाई राम्रो मानिदैन । हिन्दु धर्म लगायत अन्य धर्महरुमा पनि विहे अगावैको बच्चा जन्माउनु लाई राम्रो रुपमा हेरिदैन । तर पछिल्लो समय विहे अगावै बच्चा या पछि बच्चा भन्नेमा सबैको आ– आफ्नै धारणा पनि रहेको छ । बलिउड नगरीमा यस्ता चर्चित ४ अभिनेत्री छन् जो विहे अगावै आमा बनेका थिए । विहे अगावै आमा बन्न..
चलचित्र ‘कृ’ यूनिट रोमान्टिक गीतको सुटिङका लागि स्कटल्याण्डमा
काठमाडौं, माघ १६ । चलचित्र ‘कृ’ को यूनिट यति बेला स्कटल्याण्डमा रहेका छन् । चलचित्र कृको एक रोमान्टीक गीतको सुटिङका लागि चलचित्र युनिट स्कटल्याण्ड पुगेको हो । आगामी माघ २६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘कृ’ यूनिट ‘जानी नजानी मैले माया’ बोलको गीत छायाङ्कनको लागी शुक्रवार स्कटल्याण्ड उडेको हो। चलचित्रमा नायक अनमोल केसी र अदिति बुढाथोकीको मुख्य भूमिका रहेको छ । चलचित्रमा नायक..
चलचित्रमा कमब्याक गर्ने पूर्व 'मिस युनिभर्स' सुष्मिता सेनको तयारी
काठमाडौं, माघ १५ । पूर्व मिस यूनिभर्स सुष्मिता सेनले फिल्ममा कमब्याक गर्न चाहेको बताएकी छिन् । सुष्मिताको लास्ट फिल्म ’नो प्रोब्लम’ रहेको थियो । जुन सन् २०१० मा रिलिज भएको थियो । करीब सात वर्षदेखि पर्दाबाट टाढा रहेकी सेनले कमब्याकका लागि एउटा राम्रो स्क्रिप्ट खोजिरहेको बताइन् । अहिले उनी एक स्क्रिप्ट अध्ययन गरिरहेकी छिन् । मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन, ’म गएको..
‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’मा संजोग र वर्षासँगै प्रियंका कार्की पनि समावेश
काठमाडौं, माघ १५ । केही समय अघि चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’मा नायक संजोग कोइराला र नायिका वर्षा राउत अनुबन्धित भएका थिए । पछिल्लो समय सोही चलचित्रमा नायिका प्रियंका कार्की पनि अनुबन्धित भएको खवर बाहिर आएको छ । लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्धमा रहेका यी दुईले पहिलो पटक एकसाथ काम गर्न लागेको चलचित्रमा अर्की चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको पनि इन्ट्री भएको हो ।..
प्रेम दिवसमा ‘मेलोडी क्वीन अञ्जु पन्त साँझ–२०७४’ हुने
काठमाडौं, माघ १४ । फ्रेब्रुअरी १४ अर्थात भ्यालेनटाइन्स डेको अवसरमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चर्चित गायिका अञ्जु पन्तको विशेष सांगीतिक प्रस्तुति हुने भएको छ। ‘मेलोडी क्वीन अञ्जु पन्त साँझ–२०७४’ हुने भएको हो। साया हेल्लो क्याफे गजल बारले १४ फेब्रुअरी पन्तको एकल गायन साँझ आयोजना गर्न लागेको हो। यो अञ्जु पन्तको दोस्रो एकल प्रस्तुति हुनेछ। कार्यक्रममा गायिका अञ्जुले भनिन, ‘युवापुस्ताको लागि विशेष रहने प्रणय दिवसमा..
बलिउडका चर्चित निर्माता एवं निर्देशक करण जोहरलाई जेल हुन सक्ने संकेत
काठमाडौं, माघ १४ । बलिउड कलाकारहरू विवाद र ओलझेलमा परेको चर्चाले निरन्तरता पाइरहेको नै हु्न्छ । यति बेला बलिउडका निर्देशक, निर्माता तथा कलाकार समेत रहेका करण जोहर जेल पर्न सक्ने खबरले बलिउड मिडिया तातेको छ । करण हाल एक रियालिटि सोमा जजको रूपमा व्यस्त छन् । तर उनी कानुनी मामिलामा मुछिएका छन् । खासमा उनले एक पान मसलाको विज्ञापन गरेका थिए ।..
रुचाइएको डान्स ग्रुप कार्टुन्ज क्रुसँग नायिका प्रियंका दोस्रो पटक देखिदै (भिडियो सहित)
काठमाडौं, माघ ११ । रुचाइएका डान्स ग्रुप कार्टुन्ज क्रुसँग अभिनेत्री प्रियंका कार्की दोस्रो पटक देखिएकी छिन्। क्रु सदस्यसँग प्रियंकाको फिचरिङ रहेको ‘माछीले खाने खोलीको लेऊ’ सार्वजनिक भएको हो। क्रुका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्मासँग प्रियंकाको दोस्रो भिडियो हो। यसअघि फिल्म पुरानो डुङ्गाको ’नीर जैले रिसाउने’ बोल गीतको कभर भिडियोमा उनीहरु एकसाथ देखिएका हुन्। सार्वजनिक भिडियोमा त्रिकोणात्मक प्रेमलाई देखाइएको छ। कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको..
आगामी साउनदेखि नेपाली चलचित्र भवनमा ‘बक्स–अफिस’ लागू हुने
काठमाडौं, माघ ११ । लामो समयको बहसपछि वि.सं २०७५ साल श्रावण १ गतेबाट नेपाली चलचित्र भवनहरुमा बक्स अफिस लागू हुने भएको छ । बक्स अफिस लगाउनुपर्छ र लगाएर फाइदा हुँदैन भन्ने बिषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो । निर्माताहरुले बक्स अफिस लगाउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । चलचित्र विकास बोर्डका यस अगाडिका २ अध्यक्षले बक्स अफिस लागू गर्ने एजेन्डा..
नेफ्टा अवार्डको दसौँ संस्करण आगामी फागुन ३० गते हुने
काठमाडौं, माघ १० । नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घले आयोजना गर्ने नेफ्टा अवार्डको दसौँ संस्करण आगामी फागुन ३० गते हुने भएको छ । अध्यक्ष पुष्कर लामा (प्रेम भोम्जन)ले आफ्नो जन्मदिन र बसन्तपञ्चमी छेकोमा सोमबार मिति घोषणा गरे । यसपटकको अवार्ड पनि विदेशमै हुने भएको छ । उत्कृष्ट पाँच घोषणासँगै अवार्ड आयोजना हुने मुलुकको नाम समेत सार्वजनिक गरिने लामाले बताए । आउँदो सातादेखि पाँच..
नायिका केकी र रीमा भन्दैछन् ‘सि–ओ डब्ल्लु काउ’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं, माघ ९ । नायिका केकी अधिकारीले निर्माण गरेको चलचित्र हो ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ । चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ सोमबार नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘सी–ओ’ डब्ल्लु काउ’ बोलको गीत सोमबार युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा राजनराज सिवाकोटीको शब्द, सङ्गीत र स्वर रहेको छ भने सिवाकोटीलाई मेलिना राईले साथ दिएकी छिन् । फरक शैलीको गीतमा कलाकारहरू केकी अधिकारी, रिमा विश्वकर्मा, विनोद न्यौपान..
सरस्वती पूजाको अवसर पारेर रंगमञ्चमा पहिलो पटक संस्कृत नाटक प्रदर्शन
काठमाडौँ, ८ माघ। सरस्वती पूजाको अवसर पारेर रंगमञ्चमा पहिलो पटक संस्कृत नाटक प्रदर्शन शुरु भएको छ । श्रीपञ्चमीका अवसरमा श्री कान्तिभैरव गुरुकुल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ का विद्यार्थीले ‘तमसो ज्योतिषि’ अर्थात् अन्धकारबाट उज्यालोतिर प्रस्थान नाटक आइतबार बेलुकीदेखि प्रदर्शन शुरु गरेका हुन् । गुरुकुलको सहयोगका लागि सामाजिक विषय वस्तुमा आधारित नाटक मञ्चन शुरु गरिएको हो । नाटकको शुरुवात गर्दै भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले लोपोन्मुख..
नायिका नीता ढुंगानाको बोल्ड अवतार : ‘बाँचेनी पशुपति मरेनी पशुपति’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं, माघ ८ । यसअघि सार्वजनिक भएको ‘ठेकीमा दही’ बोलको गीतलाई सबैले मन पराएपछि चलचित्र हुर्रेको निर्माण युनिटले राजधानीमा पत्रकार भेटघाट गरेर ‘बाँचे नी पशुपति मरे नी पशुपति’ बोलको दोस्रो गीत सार्वजनिक गरेको छ । आगामी फागुन २५ गतेबाट रिलिज हुन लागेको यस चलचित्र ‘हुर्रे’मा समावेश ‘बाँचे नी पशुपति मरे नी पशुपति’ बोलको गीतमा नायिका नीता ढुंगानाले निकै नै बोल्ड शैलीमा..
लक्षित दर्शकका लागि पाटन सङ्ग्रहालयमा अस्थायी प्रदर्शनी आरम्भ
ललितपुर, ७ माघ । पाटन सङ्ग्रहालयले लक्षित दर्शकका लागि अस्थायी प्रदर्शनी शुरु गर्ने भएको छ । आगन्तुकलाई दोहोर्याएर आउने वातावरण बनाउनका लागि अस्थायी प्रदर्शनी शुरु गर्न लागिएको सङ्ग्रहालयका प्रमुख सुरेशमान लाखेले बताए । सुन्दरीचोकमा अस्थायी प्रदर्शनी शुरु हुनेछ । नियमित सङ्ग्रहालयसँगै समय समयमा अस्थायी सङ्ग्रहालय सञ्चालन हुन लागेको हो । अस्थायी सङ्ग्रहालयमा एउटा एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित प्रदर्शनी हुनेछ । उनले भने , “कहिले..
Results 904: You are at page 27 of 31